စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ: စင်္ကာပူနိုင်ငံသားခံယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော သုံးသပ်ချက်
Home သုတပဒေသာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားခံယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော သုံးသပ်ချက်
Post under သုတပဒေသာ at 1/10/2010 10:43:00 AM Posted by MYANMAR NURSES IN SINGAPORE
အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား အဖြစ် ပြောင်းရေး မပြောင်းရေး ဆွေးနွေးထားတဲ့ စာတမ်းလေးတစ်ခုဖတ်ရပါတယ်။ အချက်အလက်တွေဝေဝေဆာဆာသုံးပြီး စဉ်းစားစရာ ကောင်းအောင် ရေးသားနိုင်တာလည်းတွေ့ရတယ်။
သို့ပေမယ့် တချို့ချဉ်းကပ်ပုံနဲ့ နိဂုံးပိုင်းမှာ သဘောမတူစရာလေးတွေ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Immigration Law နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်နေတာလည်းတွေ့ပါတယ်။ မှန်ကန်ပြီးလက်ခံနိုင်တဲ့ အချက်တွေ အများကြီးပါ ဝင်ပါတယ်။
အခုရေးနေတဲ့ စာတမ်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပထမစာတမ်းကို ငြင်းချက်ထုတ်နေခြင်း သက်သက်မျှမဟုတ်ပါ။ လိုအပ်နေသေးတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း ထပ်ဖြည့်ထားပါတယ်။ ပထမစာတမ်းကို မဖတ်ရသေးရင်လည်း အရင်ဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံဘက်က ရပ်တည် ဆွေးနွေးခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ စေတနာက ဘဝတူ မြန်မာတွေအတွက်ပါ။ ဘက်တစ်ဘက်တည်းက တင်ပြတာထက်စာရင် ဘက်ပေါင်းစုံက စဉ်းစားသင့်တယ်ထင်လို့ပါ။ Informed decision ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ် ဆုံးဖြတ်ရမယ့်သူက မိမိကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ စာတမ်းလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြမ်းအဆင့်မှာ အချိန်ပေးဖတ်ရှုသူ၊ ဝေဖန်အကြံပြုကြသူ၊ ကူညီပေးကြသူများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပိုပြီး ကျေးဇူးတင်သင့်တာက ဒီစာတမ်းရေးဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်မှု ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမစာတမ်းရေးသူကိုပါ။
အခုစာတမ်းကို အောက်ပါ အချက်များကို အခြေခံပြီးရေးပါတယ်။ • မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်ကိုသာရည်ရွယ်သည်။ • မိသားစုဘဝနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို အဓိကထား စဉ်းစားပါသည်။ • ပထမစာတမ်းလိုပင် အမျိုးသားရေးကိစ္စကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပါ။ • Singapore နိုင်ငံ၏ trand နှင့် Policy များကို လက်ရှိအတိုင်း လက်ခံထားပါသည်။ • မြန်မာနိုင်ငံ၏ trand နှင့် Policy များကို လက်ရှိအတိုင်း လက်ခံထားပါသည်။ • နိုင်ငံရေးအရ တတ်နိုင်သလောက် ကြားနေအမြင်ထားပါသည်။ • ခြုံငုံကြည့်လျှင် Singapore သည် မြန်မာနိုင်ငံထက် သာလွန်သည်ဟုယူဆထားသည်။ • ရွေးချယ်စရာ သုံးခုရှိသည်ဟု ယူဆပါသည်။ o PR အဖြစ်နေပြီး မြန်မာပြည်ပြန်ခြင်း o Singaporean အဖြစ်ခံယူ ပြီး Singapore မှာပင် နေထိုင်ခြင်း o Singaporean အဖြစ်ခံယူပြီး ပိုသင့်တော်သော နိုင်ငံတစ်ခုခုကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်း
ပထမစာတမ်းပါ အချက်တစ်ချက်က စင်္ကာပူနိုင်ငံသားခံပြီးသွားသူများကို အသေအချာမစဉ်းစားပဲ နီးစပ်ရာ အသိုင်းအ၀ိုင်း ဆွဲဆောင်မှု အရ အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်ကြသူများဟု သိမ်းကြုံးပြောဆိုသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ နိဂုံးပိုင်းနဲ့တွဲကြည့်ရင် ပိုပြီးမြင်သာပါတယ်။
သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်သူများ အများအပြားရှိပါတယ်။ နှစ်နဲ့ချီ စဉ်းစားနေသူများလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။ အမှန်တော့ ဒီကိစ္စဟာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ သာသက်ဆိုင်ပြီး စာတမ်းထဲမှာ ပါသလောက် အခြားသူတစ်ယောက်က ဆုံးဖြတ်ပေးတာကို လွယ်လွယ်ယူလိုက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော့်က ဒီအကြောင်းအရာကို မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေကတည်းက တီးခေါက်မိပါတယ်။ အခြေခံကတော့ Identity Crisis ပါ။ ဒါပေမယ့် Nationality နဲ့ Culture အခြေခံ ပြီးဖြစ်တာပါ။ စင်္ကာပူရောက်လာတော့လည်း လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများ သိကြသလောက်က မြန်မာက စင်္ကာပူလာတယ်။ Identity Crisis ဖြစ်တယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ သတိပြုစရာက နိုင်ငံခြားမှာနှစ်အတော်များများ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ပြည်တော်ပြန်ကြတဲ့အခါလည်း Identity Crisis ဖြစ်ဖို့ အတော်များပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်ပြန်တာ ဖြစ်စရာလားလို့မေးရင် လေ့လာကြည့်ပါ။ နိုင်ငံခြားပြန် အတော်များများဟာ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ရင် နေသားကျဖို့ အတော် ကြိုးစားရပါတယ်။ စီးပွားရေးပါထည့် စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် သန်တုန်းမြန်တုန်းဆိုပါက နိုင်ငံခြားတောင် ပြန်ရောက်ဖို့များပါတယ်။ အပေါင်းအသင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်း အားလုံးဟာ ကိုယ်နှစ်ပေါင်းများစွာ နေသားကျလာတာနဲ့ အများကြီးကွာခြားသွားပါပြီ။ ကိုယ်ပိုင် Value တွေလည်း နည်းနည်းနည်းနည်းနဲ့ အများကြီး ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ ဒီအချက်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းအသိုင်းအဝိုင်း ဘယ်လောက် ကျန်သလည်း၊ ကိုယ်ဘာတွေတန်ဖိုးထား သလည်း၊ ကိုယ့်မိသားစုရဲ့ ဆန္ဒကဘာလည်း စသည်ဖြင့် စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စကစမ်းသပ်ဖို့ သိပ်မခက်ပါ။ မြန်မာပြည်ကို ရက်ရှည်ရှည်လေးပြန်ကြည့်လိုက်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောင်းတာတွေချည်းပဲမြင်နေသလား၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒုက္ခလေးတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ရင်ဆိုင်နိုင်မှာသေချာလား ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Singapore ဟာဗမာတွေ သွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ National Identity Clash အနည်းဆုံးပါ။ မြန်မာ community ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ Cultural difference နည်းတယ်။ စင်္ကာပူမှာ နေပြီး Identity Crisis ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကို အမြန်ဆုံးပြန်တာ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံဟာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမှာ အတော်လေးသက်သာတဲ့ နိုင်ငံထဲမှာ ပါပါတယ်။ လုံးဝ မရှိဘူးမဆိုလိုပါ။ မြန်မာပြည်ဟာ စင်္ကာပူထက် အများကြီး လူမျိုးရေး ခွဲခြားပါတယ်။ Aussie, USA, UK တို့ကို စင်္ကာပူထက် လူကြိုက်များမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမှာ အဆိုပါနိုင်ငံများဟာ စင်္ကာပူထက် ပိုဆိုးပါတယ်။ လူမျိုး၊ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်ရာစသည်ဖြင့် အတော်များများဟာ နီးကပ်ပါတယ်။ မြန်မာတွေ စလုံးဖြစ်သွားရင် ဘာဖြစ်လို့ Singaporean လို့ မပြောနိုင်သလဲဆိုတာ ကလည်း မြန်မာတွေပေါ်မှာ အတော်များများ မူတည်ပါတယ်။ Burmese Singaporean ဆိုတဲ့ Identity ကို သိပ်လက်မခံနိုင်လို့ပါ။ သိသိသာသာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကြောင့်လို့ မထင်ပါ။ Singaporean လို့ ပြောတဲ့သူတွေကို အခြားမြန်မာတွေက တစ်မျိုးမြင်ကြတာလည်းပါပါတယ်။ Sinaporean လို့ ပြောတဲ့သူတွေလည်း အများကြီး တွေ့ဖူးပါတယ်။ ရောမရောက်လို့ ရောမလို ကျင့်တာ ရှက်စရာမဟုတ်သလို ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ အမှတ်အသားသရုပ်ကို ထိမ်းသိမ်းတာဟာလည်း ဂုဏ်ယူသင့်တဲ့ အလုပ်ပါ။
Singapore ရဲ့ trend ကို သုံးသပ်ပြတာကတော့ ကောင်းပါတယ်။ မည်သူမဆို Singapore အလုပ်လုပ်နေရင်သူ့ trend ကိုကြည့်ရမှာပါ။ Singapore ရဲ့ Risk တွေကို ပြသွားတာလည်း ကောင်းပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မြန်မာများအတွက်ကတော့ ဘယ်ရေကပိုကြည်သလည်း ဘယ်မြက်ကပိုနုသလည်းက ပိုအရေးကြီး ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ပိုကောင်းတယ် ဆိုသူများအတွက်ကတော့ ဘာမှဆက်စဉ်းစားစရာမလိုပါ။ အများစုအတွက်က မြန်မာပြည်မှာ ရေမရှိမြက်မရှိတော့လို့ ရောက်လာကြတာ မဟုတ်ပါလား။ အခြားနိုင်ငံသားများနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဘယ်လိုမှ ယှဉ်စဉ်းစားလို့မရပါ။ အခြားနိုင်ငံသားများ ဟာ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလောက် အထိပါးမခံရပါ။ ဥပမာအနေဖြင့် တရုတ်၊ ဘင်္ဂလားနဲ့ အိန္ဒိယ တွေကိုကြည့်ပါ။ Singapore ရဲ့ Trend ကတော့ သူတို့ခေါင်းဆောင်များပြောတဲ့အတိုင်း ပထမ စာတမ်းက ဆိုတဲ့အတိုင်း ရွေ့နေပါတယ်။ အောက်က Link မှာ လေ့လာကြည့်ပါ။ Manufacturing Sactor က မြန်မာများ ပိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ Share of GDP by Industry http://www.singstat.gov.sg/stats/charts/econ.html ရေကြည်ရာမြက်နုရာဆိုရာဝယ် ကိုယ့်တစ်ဦးတည်း အတွက်သာမက သားသမီးများအတွက်ပါ စဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သားသမီးများ ပညာရေးကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိသလောက်နှင့် ကျေနပ်မည်လား။ အလုပ်လုပ်ရမည့် အချိန်ရောက်ပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာ လုပ်ကိုင်စေမည်လား။ မိမိသားသမီး အရွယ်ရောက်လာပါက မိမိကဲ့သို့ပင် တစ်ကပြန်စပြီး နိုင်ငံခြားထွက် ရုန်းကန်စေမည်လား။ လူပြောများတဲ့ Identity Crisis ဆိုတာကြီးကို မိမိသားသမီးကို နောက်တစ်ခေါက် ခံစားစေချင်ပါသလား။ စင်္ကာပူစီးပွားရေးခိုင်မာမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ သိပ်မပြောချင်ပါဘူး။ US လို ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံမှာတောင် Risk တွေအများကြီးရှိသေးတာပဲ။ ကိုယ့်အတွက် စဉ်းစားရမှာက မိုးပြိုမှာကို တွေးကြောက်နေမလား ဒါမှမဟုတ် ပြိုကျနေတဲ့ကောင်းကင်ပေါ်မှာ နေချင်သလား။ ဒါမှမဟုတ် ပိုခိုင်မာတဲ့ မိုးကောင်းကင်အောက်မှာ နေချင်သလား။ တစ်ခြားနိုင်ငံကြီး တစ်ခုခုကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ SG Citizenship ကို ခုတုံး လုပ်လို့ရပါတယ်။ လုပ်သွားကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ SG ကို Base လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် သင့်မှာ ရွေးချယ်စရာလမ်းတွေက အများကြီးတိုးလာပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက တခြားနိုင်ငံသားတွေထက်ပိုပြီး စလုံးပြောင်းကြတာပါ။ Singapore Economic Condition and Trand Singapore facts http://www.singstat.gov.sg/stats/keyind.html#note4c Households and Housing section for Home Ownership Rate http://www.singstat.gov.sg/pubn/catalogue.html#ghs Share of GDP by Industry http://www.singstat.gov.sg/stats/charts/econ.html#econJ Manufacturing က Financial နဲ့ Business Service ထက် မြင့်နေတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သိသိသာသာကိုကျလာပါတယ်။ Construction ကအစထဲက နည်းပါတယ်။ စင်္ကာပူ အစိုးရအသုံးစားရိတ်မှာ Construction လည်းပါတော့ စီးပွားရေး နှေးလာရင် Counstruction နဲ့ Boost လုပ်တတ်ပါတယ်။ သိသိသာသာ တက်လာတာကတော Wholesale and Retail Trade မှာပါ။ Transport and Stroage ကတော့ ပုံမှန်သွားမယ့်ပုံရှိတယ်။ စင်္ကာပူဆိပ်ကမ်းနဲ့ လေဆိပ်က အရေးပါဆဲပါ။
စလုံးခေါင်းဆောင်တွေပြောသလိုပဲ သူတို့ရဲ့ တိမ်းညွှတ်ချက်က Hub ဆိုတဲ့ဘက်ကို ဦးတည်လာပါပြီ။ ပထမစာတမ်းရှင်ပြောထားသလိုပဲ Manufacturing က မြန်မာတွေ သေချာစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အနီးဆုံး Asian Financial Crisis ကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ စင်္ကာပူရဲ့တုန့်ပြန်မှုကို လေ့လာကြည့်ချင်ပါတယ်။ အကိုးအကားများကို နောက်ဆက်တွဲ-၆ မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီစီးပွားရေး အကျပ်အတည်းဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက စဖြစ်ခဲ့ပြီး Asia Pacific Region ကို အဆိုးဝါးဆုံး ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ CIA ရဲ့စာတမ်းအရ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှားတို့ဟာ ဒီအကျပ်အတည်းရဲ့ ဒဏ်ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ ခံစားနေရပါသေးတယ်။ စင်္ကာပူက Economic Counter Measure တွေကို အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စင်္ကာပူစီးပွားရေးဟာ တစ်နှစ်အကြာမှာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ စင်္ကာပူရဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းပုံက Hong Kong လိုလည်း Capatical Market ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရခြင်း မရှိသလိ South Korea လိုလည်း လုပ်ငန်းကြီးတွေ ဆုံးရှုံးခြင်း မရှိပါဘူး။ အကျယ်ချဲ့ပြီးလေ့လာချင်ကြရင်တော့ ဒါနဲ့ပါတ်သက်ပြီး စာအုပ်စာတမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ Aisia Crisis တစ်ခုတည်းကို ကြည့်ပြီး စင်္ကာပူရဲ့ စီးပွားရေးခိုင်မာမှုကို အကဲဖြတ်လို့ မရနိုင်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် စင်္ကာပူရဲ့ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့တွက်ထားလို့မရပါ။
ဒီစာပိုဒ်တစ်ခုလုံးက Singapore ရဲ့ Social Development Policy ကို ဝေဖန်ထားတာဖြစ်ပြီး အတော်များများ မြန်မာများပြောနေဆိုနေကျ ရှုထောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ကိစ္စမဆို အပေးအယူရှိမြဲပါ။ အစိုးရက သူလိုချင်တာတွေရဖို့ သူ တတ်နိုင်တာပေးတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲကြည့်ရပါမယ်။ ကိုယ်ဘာပေးရမလဲ စဉ်းစားရပါမယ်။ သူဘာရသွားသလဲဆိုတာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် ကိုယ်ဘာကြောင့် ဒီမှာလာနေရ သလည်း စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
Singapore ရဲ့ Safty Net က Welfare State တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အများကြီးလိုပါတယ်။ သူ့ Policy ကလည်း Nothing should be free ဆိုသကိုး။ ဒါပေမယ့် ဘာ Safty Net မှမရှိတာထက်တော့ သာတယ်ထင်ပါတယ်။ Insurance Plan တွေနဲ့ တွဲယူလို့ ရတဲ့ Investment Plan တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ အလယ်အလတ်တန်း ဝင်ငွေရှိသူ PR/Singaporean များ ကောင်းကောင်းလက်လှမ်းမှီပါတယ်။ ဒီ Plan တွေမှာ Family တွေအတွက် သက်သာစေမယ့် အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံကို ရွှေ့ယူနိုင်တဲ့ Plan တွေလည်းရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်မယ်စိတ်ကူးရင်တော့ မလုပ်ထားတာပိုကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ အနေအထားအရ ဒီ Insurance တွေကို ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ရွှေ့ပြီး ခံစားရဖို့ မရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားပြီးမှ နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး ဆေးကုရမယ့် အခြေအနေမျိုးတိုးရင်တော့ နှစ်ခါနာပါပြီ။ နိုင်ငံအတော်များများမှာ Foreigner ဆိုရင် ကုသစားရိတ်ပိုယူပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း PR ဘဝနဲ့နေနေတုန်း Insurance အလုံအလောက်မထားမိဘဲ ဆေးရုံတက်ရရင်တော့ ရင်သာဖိထားပေတော့။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Plan လုပ်ရင် Insurance Policy တွေကို အသေအချာ လေ့လာပြီး ကိုယ့်ဒီမှာနေမယ့်အချိန်၊ တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ၊ ရနိုင်တဲ့အကျိုးအမြတ် စတာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ Insurance ကို မယုံဘူးဆိုရင်တော့ မိမိဘာသာ စုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဆက်စပ်စဉ်းစားဖို့ UN က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Life Expentancy ကို ယှဉ်ပြပါမယ်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ အစားအသောက်၊ ပတ်ဝန်းကျင် စတာတွေက လွမ်းမိုးမှာပေါ့။ စင်္ကာပူဟာ အသက်အရှည်ဆုံး နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဂျပန်ထက် နှစ်နှစ်ကျော်ပဲ နည်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာနေရင် စင်္ကာပူမှာထက် အသက် ၁၈ နှစ် ပိုတိုနိုင်ပါတယ်။ UN Burma Life expectancy = 62.1 UN US Life expectancy = 78.2 UN Singapore Life expectancy = 80 UN Japan Life expectancy = 82.6 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy
မူလစာတမ်းမှာမပါပေမယ့် ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ နည်းနည်းထည့်ပြောချင်ပါတယ်။ စင်္ကာပူ ပညာရေးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ယှဉ်လိုက်ရင် ဘယ်ဘက်ကသာသည်ကို ငြင်းစရာ သိပ်မရှိဘူးထင်ပါတယ်။ ပညာရေးဖက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ နိမ့်ကျတာနဲ့အမျှ စင်္ကာပူ ပညာရေး ကလည်း စားရိတ်ကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပညာရေးမှာ Hidden cost တွေအများရှိနေသေးတာ သတိပြုမိမှာပါ။ တစ်ဖက်က မြန်မာနိုင်ငံက International School တွေကို ထည့်စဉ်းစားမယ် ဆိုရင်တော့ စင်္ကာပူက အစိုးရကျောင်းက Primary နှင့် Secondary အဆင့်မှာ ဈေးသက်သာ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Tertiary Education အဆင့်မှာ မိမိကိုယ်တိုင် တိုးတက်မှုအတွက် တက်ရတဲ့ကျောင်း သားသမီးကို ထားပေးရတဲ့ ကျောင်း စသည်များမှာ ပညာရေး အခွင့်အလမ်းအားဖြင့် PR နဲ့ Singaporean ကို ခွဲခြား ထားပါသေးတယ်။ ဥပမာ သားသမီးများအတွက် Baby Bonus အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။ ကလေးပညာရေးအတွက် အစိုးရ စိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ အဆင့်မြင့် ပညာရေးမှာလည်း Citizen ကပိုရတာတွေရှိပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ-၅ မှာ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စင်္ကာပူက သူတို့ကျောင်းတွေကို ဘယ်လိုပင် Promote လုပ်နေနေ၊ စလုံးတွေကို ကိုယ်တိုင် အနောက်နိုင်ငံများက ပညာရေးကို ပိုအထင်ကြီးပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူ အလွှာက ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ အနောက်နိုင်ငံက ဘွဲ့ရတွေပါ။ အဲဒီလို ပညာရေးမျိုးကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်း Singaporean ဖြစ်ခြင်းက ပို အထောက်အကူပြု ပါတယ်။ ကလေးက စာတော်သလား၊ ငွေကြေးတတ်နိုင်သလား၊ စသည်တို့အပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးစရာ အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုများပါတယ်။ Singapore က ကျောင်းသွားတက်သူများ အတော်များများကတော့ Singapore ကို ပြန်မလာကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ပညာရေးအတွက်ကို ဦးတည် စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံသားများမှာ ရွေးစရာ သိပ်မရှိဘူး ထင်ပါတယ်။
CPF နဲ့ပတ်သက်ပြီး ညည်းကြတာတော့ အတော်များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တခြားတစ်ဖက်က ကြိုးစားပြီးပြောကြည့်ပါမယ်။ CPF ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်သလို မကောင်းဘူး တစ်ဖက်သတ် မပြောချင်ပါ။ CPF ထုတ်နိုင်တဲ့ အသက်ကို တိုးခြင်းက Life Expectancy တိုးလာလို့ဆိုပြီး အကြောင်းပြပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကလေးယူနည်းလာမှုကြောင့် စင်္ကာပူ Workforce ကအသက် ကြီးလာတာလည်းပါပါတယ်။ CPF နဲ့ အလားတူ အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ရှိကြပါတယ်။ US မှာဆိုရင် Social Security Fund ပေါ့။ နှစ်ခုလုံးက မလုပ်မနေရပါ။ ဒီနှစ်ခုကို လေ့လာပြီး ဆွေးနွေးထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့ တချို့ လေ့လာချက်တွေက CPF က ပိုကောင်းတယ် လို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။ အများစုက အနောက် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေပါ။ အသေးစိတ်ကို နောက်ဆက်တွဲ-၁ က Link တွေမှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥပမာတစ်ခုပေးရရင် SG Home Ownership rate ပါ။ 90% ရှိပါတယ်။ US က 68.9% ရှိပါတယ်။ Spain က 85% ပါ။ ဒါကို CPF ရဲ့ Flexibility ကြောင့်လို့ သူတို့က ဆိုကြပါတယ်။ တစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားရင် CPF Scheme ဟာ Asia Pecific Region မှာ အနိမ့်ဆုံးပါ။ အများဆုံး Pension ရတဲ့ Tiwan မှာ နောက်ဆုံးဝင်ငွေရဲ့ 70% ရပါတယ်။ Singapore CPF က ခုနှစ်ပုံတစ်ပုံပဲရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် CPF ဘက်က Home Ownership, Education နဲ့ Flexibility မှာ သာတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ အခု 2013 မှာ Minimum Sum တက်မဲ့ ကိစ္စဟာ Pension Replacement (ပင်စင်လစာ) ကို ပိုတိုးပေးဖို့ဆိုပြီး အကြောင်းပြထားပါတယ်။ Singapore ဟာ Welfare State မဟုတ်ဘူးလို့ ကျေညာထားပါတယ်။ CPF မတိုးရင် Welfare State တွေ လုပ်နည်းအတိုင်း Tax တိုးရပါမယ်။ Individual တိုးရင်လည်း လူတွေပိုပေးရမှာပါပဲ။ Investment friendly လည်း ဖြစ်ချင်သေးတော့ Corporate Tax လည်း တိုးလို့မရပါဘူး။ ဒါက စင်္ကာပူရဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါ။ အသေးစိတ် လေ့လာချင်ရင် နောက်ဆက်တွဲ-၁ ပါ Link များမှာ ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ CPF ဟာ Pension နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ သိပ်မကောင်းလှပါဘူး။ စလုံးတွေကတော့ ကာမိအောင် အခြား Investment Plan တွေကို ဝယ်ပါတယ်။ စလုံးတစ်ယောက်ပြောဖူးတာ ကိုးကားရရင် Personal Freedom ပိုကြိုက်တဲ့ အနောက် နိုင်ငံသားတွေက Singapore System ကို ကြိုက်တယ်ဆိုပါတယ်။ ခြုံပြီးပြောရရင် CPF ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး ဆိုတာကို တဖက်သတ်အမြင်နဲ့ ပြောတာထက်ကို မိမိဘာသာ မိမိအကြိုက်နဲ့ ကိုက်မကိုက် လေ့လာသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။
ပထမစာတမ်းမှာမပါတဲ့တစ်ခုက Tax ပါ။ စင်္ကာပူရဲ့ Tax ကိုကြည့်ရင်လည်း သူက အခြား First world က Welfare State တွေထက် သိသိသာသာ နည်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ US နဲ့ဆိုရင် သုံးဆလောက်အနည်းဆုံး ကွာပါတယ်။ ဒီပိုငွေကို Insurance, Saving, Investment စသည်ဖြင့် အကျိုးရှိအောင် သုံးလို့ ရပါသေးတယ်။ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေခွန်တွေကို အောက်မှာနှိုင်းယှဉ်ပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ အများဆုံး စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တဲ့ နိုင်ငံသုံးခုကို ရွေးထားပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ-၂ မှာကြည့်ပါ။ တစ်နှစ် Singapore dollar ၃၀,၀၀၀ ကျော်ဝင်ငွေရှိရင် အခွန်က ၅.၅% ပါ။ Australia မှာ ၃၄,၀၀၀ ကျော်ရင် ၁၅% ပါ။ US မှာ ၃၂,၅၅၀ ကျော်ရင် ၂၅% ကျသင့်ပါတယ်။ Tax နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောမယ်ဆိုရင် အတော်များများက Singapore အခြားနိုင်ငံထက်စာရင် ဝင်ငွေနိမ့်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Cost Of Living ကိုထည့်တွက်ရပါမယ်။ ဝင်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေအချိုးကို ကြည့်လိုက်တော့လည်း Singapore ဟာ ဈေးကြီးတဲ့နိုင်ငံထဲမှာ ထိပ်ဆုံးနားကပါပါတယ်။ ဝင်ငွေပမာဏတွေဟာ နိုင်ငံအလိုက် ငွေကြေးဖြင့်သာ တွက်ချက်ထားပါတယ်။ မြို့အလိုက် နေထိုင်မှုစားရိတ်ကိုကြည့်ရင် စင်္ကာပူက ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၁၀ မှာရှိတယ်။ Beijing, NewYork, HK တို့ ထက်သက်သာပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို နောက်ဆက်တွဲ-၂ မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စစ်တမ်းဟာ အစိုးရစိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ အိမ်ယာစီမံကိန်းတွေကို ထည့်မစဉ်းစားပါဘူး။ အိမ်ဈေးဟာ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးပါ။ အဲဒီအိမ်ဈေးဟာလည်း Cost of Living ကိုတွက်တဲ့အခါမှာ ကြီးကြီးမားမားလွှမ်းမိုးမှု ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အိမ်လိုမျိုး အရင်းအနှီးကြီးတဲ့ အရာတွေဝယ်ဖို့ စိတ်ကူးမယ်ဆိုရင် အစိုးရက စိုက်ပေးမယ့် ကိစ္စကို ထည့်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ စင်္ကာပူရဲ့ ၉၀% အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုတာကိုထည့်စဉ်းစားရင် အစိုးရစိုက်ထုတ်မှုရဲ့ အကျိုးကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တန်ဖိုးထားမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီး စဉ်းစားပုံတွေ တူနိုင်မယ်မထင်ပါ။ အသေအချာထည့် စဉ်းစားဖို့ပဲလိုပါတယ်။ အိမ်ဝယ်နေရင် ပိုင်ဆိုင်မှုရမယ်၊ ငှားနေတာထက် သက်သာတယ်၊ စသည်ဖြင့် သိကြပါတယ်။ စင်္ကာပူ အိမ်ဈေးအတက်အကျကတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ Property ဈေးကွက်ဟာ Singapore economy ကို ထိမ်းတဲ့နေရာမှာ အရေးပါပါတယ်။ အိမ်ဈေးကို အစိုးရက တတ်နိုင်သလောက် အကျမခံပါဘူး။ ၂၀၀၈ စီးပွားရေး စကျကာစက စပြီး Property ဈေးကွက် ကျမယ်လို့မှန်းကြတာဟာ Private တွေလောက်ပဲ နည်းနည်းကျလိုက်ပြီး HDB တွေသိပ်မလှုပ်ပါဘူး။ စလုံးစီးပွားရေးက ဘုန်းဘုန်းကျတော့မှ အိမ်ဈေးဆိုးဆိုးဝါးဝါး ကျမယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ အိမ်ဝယ်သင့်သလား၊ ငှားနေသင့်သလားဆိုရင် ဈေးကွက်အခြေအနေ ကြည့်ပြီး တတ်နိုင်ရင်ဝယ် သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အိမ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ PR အနေနဲ့ ဝယ်မလား စလုံးအနေနဲ့ဝယ်မလား စဉ်းစားရပြီပေါ့။ အထက်မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ CPF အကြောင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစု ဝင်ငွေ၊ စုဆောင်းငွေ စသည်ဖြင့် ထည့်စဉ်းစားရမှာပါ။
ပထမစာတမ်းကို ရေးသူက Identity Crisis ကိုဒီမှာ ချဲ့ရေးထားတာပါ။ မျိုးဆက်ကိစ္စ ကိုလည်း ထိတွေ့ထားလို့ နည်းနည်းပြန်ရှင်းချင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမတူနိုင်ပါဘူး။ အားလုံးအတွက် ဘုံ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး မြန်မာပြည်မှာ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်း၊ ခင်မင်ရာ မိတ်ဆွေ ဘယ်လောက်ကျန်ခဲ့သလည်း။ တချို့ Generation တွေဆို အပေါင်းအသင်း အားလုံးလောက်က ပြည်ပမှာပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ကျန်ခဲ့ရင်လည်း အတော်နည်းနေပါတယ်။ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ အားလုံးက ပြည်ပမှာ ဆိုရင် အတော်များများ မိဘတွေက လိုက်နေဖြစ်ကြတာများပါတယ်။ တစ်ချို့သူတွေအတွက် မြန်မာပြည်က ဘီယာဆိုင်မှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်ရမယ့် အနေအထားပါ။ ကလေးများအတွက်တော့ အတော်ရှင်းပါတယ်။ Cultural ကိစ္စက တွေ့ရမှာပဲ။ မိဘက လက်ခံပေးနိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ကလေးကို မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ရှင်သန်စေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကို ခေါ်မလာတာ အကောင်းဆုံးပါ။ မြန်မာပြည်မှာထားပြီး အသက်ကြီးမှ ဒီရောက်လာရင် ကိုယ်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခဆိုတာတွေကို ကိုယ့်သားသမီး နောက်တစ်ကြိမ်ခံစားရမှာ မေ့ထားလို့မရပါ။ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ Singapore ဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေထက် သာပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံမှာ Christian ဖြစ်ဖို့၊ ဘာသာမဲ့ဖြစ်ဖို့ ပိုများပါတယ်။ Singapore မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ အတော်များများထက် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ တရုတ်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကိုးကွယ်တာကလည်း ထေရဝါဒပါ။ အပတ်တိုင်းတရားထိုင်တဲ့သူတွေပါ။ ခြုံကြည့်လိုက်ရင် စင်္ကာပူမှာ မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်း တောင့်တောင့်တင်းတင်းနဲ့ ဘာသာရေးအဝန်းအဝိုင်းနဲ့ ရှိပါတယ်။ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာလို သင်္ကန်းမြင်ရဖို့ မိုင်ပေါင်းရာချီကားမောင်းစရာလည်းမလိုပါဘူး။ ယဉ်ကျေးမှု ကလည်း အရှေ့တိုင်းသားချင်း နီးစပ်တယ်။ လူမျိုးခွဲခြားမှုကလည်း အခြားနိုင်ငံထက်စာရင် သိပ်မသိသာလှပါဘူး။
First World နိုင်ငံများ နှင့် ယင်းတို့ကို အတုယူနေကြသော နိုင်ငံများတွင် ဒီကိစ္စက အတော်လေး ခေါင်းစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘဝကိုရုန်းကန်နေရဆဲ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေတွေ့ရသလို ဘီယာဆိုင်ထိုင်ပြီး ကောင်မလေးတွေနဲ့ကြည်နူးနေတဲ့ အဘိုးကြီးတွေလည်းအများကြီးပါ။ Singapore ကိုကြည့်ရင် CPF ကိုက Social Bonding ကို အခြေပြုထားပါတယ်။ အနောက်ဆန်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာလို ၁၈ နှစ်ပြည့်ရင် လက်လွတ်ပြီဆိုတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ သားသမီးတွေကို မိဘက ပိုကြည့်ပေးကြသလို မိဘတွေကိုလည်း သားသမီးတွေက ပြန်ကြည့်ပေးကြပါတယ်။ အတိုင်းအတာကတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မတူနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သားသမီးအတွက် ငွေသုံးတဲ့အခါ သေချာ စီမံကိန်းချပြီးတော့ သုံးသင့်ပါတယ်။ အသုံးလွန်သွားရင် အသက်ကြီးချိန်မှာ ဒုက္ခတွေ့နိုင်တာ အတိအကျပါ။ သားသမီးတွေကလည်း သူတို့လိုအပ်ချက်တွေ ဘဝ ရည်မှန်းချက်တွေ အတွက် သုံးရဦးမှာပါ။ အောက်က စင်္ကာပူ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အကြောင်းဖတ်ကြည့်ရင် သူတို့ရဲ့ နေဝင်ချိန်ယဉ်ကျေးမှုကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က လေ့လာထားတာဖြစ်တော့ နည်းနည်းတော့ လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်နဲ့ ကောက်နှုတ်ချက်များကို နောက်ဆက်တွဲမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ပညာရေးမရှိသူ သက်ကြီးရွယ်အို ၅၆.၉% အိမ်ပိုင်နှင့် နေထိုင်သူ ၇၃.၇% မိမိဝင်ငွေကို ကျေနပ်သူ ၇၉.၂% အလုပ်လုပ်ရန်မလိုသူ ၆၅.၉% Working Sales and service workers (36.3%) Working Cleaners and labourers (23.4%) Working Professional/managerial role (16.4%). ဒီလေ့လာချက်ကို သုံးသပ်ကြည့်ရင် အသက်ကြီးမှ တပင်တပန်းအလုပ်များကို လုပ်ရမယ့် အခြေအနေက မြန်မာများအဖို့ ဝေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Working Senior တွေက ၃၄ ရာနှုန်းရှိပြီး ပညာမတတ်သူ Senior တွေက ၅၆.၉ ရာနှုန်းရှိတာကို ကြည့်ရင် မူလတန်းပညာရေးလည်းမရှိ အသက်မွေးဝန်းကျောင်းလည်းမတတ်သူ အားလုံးတောင် အလုပ်လုပ်စရာမလိုတာတွေ့ရပါတယ်။ အခြားအကြောင်းတွေ အများကြီးလည်းရှိနိုင်သော်လည်း ပညာရေးက အခြေခံမို့ ပညာရေးနဲ့ ယှဉ်ပြောတာပါ။ အရေးကြီးတဲ့အချက်က ၇၉ ရာနှုန်းကျော်က သူတို့ရဲ့ ဝင်ငွေကို လိုတာထက် ပိုနေသေးတယ်ဆိုကြပါတယ်။ အသက် ၅၅နှစ် အထက် စလုံးများက သူတို့အတွက်ဘဝဖိစီးမှုတွေ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်းနည်းလာတယ်လို ဖြေဆိုကြပါတယ်။ ၆၇.၈% ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စာတမ်းမှာတော့ မိသားစုရဲ့ ထောက်ပံ့မှုဟာ အရေးပါတဲ့အချက်လို့ ကောက်ချက်ချပါတယ်။ လူမှုရေးအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်လည်း ၆၇.၈% က သူတို့ရဲ့ မိသားစုကို ကျေနပ်ဖွယ်ရာ လို့မြင်တဲ့ သဘောပါ။
ထည့်ပြီးစဉ်းစားစရာ ကောင်းတဲ့အချက်က ဘယ်အခြေအနေဆိုရင် စင်္ကာပူမှာ လူတန်းစေ့ပြီ ဆိုနိုင်သလည်း ဆိုတာပါ။ Singapore middleclass behaviour ကို တီးခေါက်မိဖို့ ကြိုးစားထားပါတယ်။ အောက်က Link မှာ Excel File ကို Download လုပ်ပြီးအသေးစိတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Stat Tables in Excel http://www.singstat.gov.sg/ Excel Sheet တွေဟာ မိသားစု ဝင်ငွေ အလိုက် လေ့လာထားတာပါ။ ဝင်ငွေအုပ်စုတွေကို အကြမ်းအားဖြင့် သုံးစုပေါင်းလိုက်ပါမယ်။ Three Catagory of Income group 1. <2000 2. 2000-4000 3.>4000 Feasible target for most Burmese should be group 2. T1: HOUSEHOLDS BY MONTHLY HOUSEHOLD EXPENDITURE AND INCOME GROUP ဒီဇယားကို သုံးပြီး အလယ်အလတ်လူတန်းစား ရဲ့ဝင်ငွေ သုံးငွေတွေကို လေ့လာလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေ ဦးတည်ကြိုးစားရမယ့် အလယ်အလတ်လူတန်းစားရဲ့ အကြောင်းကိုသိရမှာပါ။ monthly Household Income >3000 = 55.71 % <2000 = 28.89 % 2000 - 3000 = 15.80 % Average monthly Household Expense across all income level = 3,244 SGD The largest group of Household by incomegroup = 3000-3999 (13.39%) The second largest group of Household by incomegroup = <1000 (11.5%) အထက်ပါအချက်တွေကိုကြည့်ပြီး ကောက်ချက်ဆွဲရင် စင်္ကာပူဟာ လူလတ်တန်းစားကို အတော်လေးကြိုးစား ပျိုးထောင်ထားတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယအကြီးဆုံး အုပ်စုက ဝင်ငွေအနိမ့်ဆုံးအိမ်ထောင်တွေဖြစ်နေတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အဲဒီအုပ်စုထဲကတော့ ကောင်းကောင်းလွတ်ကင်းပါတယ်။ မြန်မာတွေအတွက် လက်တွေ့ အဖြစ်နိုင်ဆုံး ရည်မှန်းချက်ကတော့ တစ်လ မိသားစုဝင်ငွေ ၃၀၀၀ က ၄၀၀၀ အုပ်စုပါ။ အိမ်ထောင်ဖက်နှစ်ဦး အလုပ်လုပ်ကြရင် မခက်ခဲတဲ့ ရည်မှန်းချက်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ဦးဝင်ငွေနှစ်ထောင်ကျော်ခဲ့ရင်ကို လူလတ်တန်းထဲ ကောင်းကောင်း ရောက်ပါပြီ။ အသုံးစားရိတ် တစ်လ ၃၂၄၄ ဆိုတာ မြန်မာအိမ်ထောင်တစ်စုအတွက် အတော်များတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီထက်လျော့အောင်ကြိုးစားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီထက်အသေးစိတ်ပြီးလေ့လာချင်ရင် မိသားစုဝင်အရေအတွက်ကို ထည့်စဉ်းစားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီစာတမ်းမှာတော့ ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါမယ်။
အရေးကြီးတဲ့ အပိုဒ်တွေကို ကူးထည့်ထားပါတယ်။ Reference Link ကိုလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ ၁၉၇၄ ဥပဒေကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် ကြေညာချက်နဲ့ ပြင်ဆင်ပြီး အတည်ပြု သုံးစွဲနေဆဲပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေ အတွက် Social Visit Visa ထုတ်ပေးပြီး ၁နှစ်စာအတွက် USD 90 ကျသင့်ပါတယ်။ PR အခွန်တစ်လစာထက် နည်းပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံအရ ဒီပုံစံနဲ့ မြန်မာပြည်ပြန်လာနေသူ အများကြီးရှိပါတယ်။ အားလုံး အိမ်မှာပဲနေတာပါ။ ဒီဥပဒေကောက်နှုတ်ချက်နဲ့ Link တွေကို နောက်ဆက်တွဲ-၄ မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာ တစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံဝန်ကြီးဌာန Website တွေက Down နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေကို UN Website တို့ Opposition တွေထူထောင်ထားတဲ့ Website တို့ကနေ တွေ့ရတာပါ။ တကယ်တမ်းထပ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသားများသာ ဆိုတာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဘယ်ငွေမျိုး ပေးလို့မှ မရပါဘူး။ ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာ နိုင်ငံခြား Passport ကိုင်ထားသူက ပိုတောင် အခွင့်အရေး သာပါသေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်မှ စွန့်လွတ်သွားသူများပေးသော အကြောင်းပြချက်များ
အခွန်အခ နှစ်ခါပေးဆောင်ရခြင်း • နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အတွက် ကာကွယ်မှု၊ အာမခံမှု၊ နွေးထွေးမှုမရှိခြင်း • အခွန်အကောက်နှင့် ကောင်စစ်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရောထွေးနေခြင်း • အခြားနိုင်ငံသံရုံးများ၏ နှိမ်ချဆက်ဆံမှုကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံစားရခြင်း • မြန်မာတစ်ယောက်အဖြစ် နိုင်ငံတကာတွင် လုံလောက်သော ဂုဏ်သိက္ခာ မရှိခြင်း • မြန်မာပြည်၏ ပညာရေး ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို မကျေနပ်ခြင်း • မြန်မာပြည်တွင် ပြန်အခြေချရန် လုံလောက်သော အခြေခံမရှိခြင်း • စင်္ကာပူ နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရသည်ကို နှစ်သက်ခြင်း • စင်္ကာပူအစိုးရ၏ စိုက်ထုတ်ပေးမှုများကို လိုအပ်ခြင်း • အသိုင်းအဝိုင်း ဆွေမျိုးများအားလုံး ပြည်ပတွင်ရှိနေခြင်း • အခြားနိုင်ငံများသို့ ထပ်ဆင့် အခြေချလိုခြင်း • လူအများလုပ်သည်ကို လိုက်လုပ်ခြင်း • သားသမီးများအတွက် အနစ်နာခံခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာဖို့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာတော်တော်များများက တစ်ယောက် စလုံးလုပ်ရင် အိမ်ထောင်ဖက်က PR နဲ့နေပါတယ်။ နှစ်ဖက်ခွ နင်းထားတဲ့ သဘောပါ။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ လုပ်ငန်းတွေ၊ အမွေတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုပါပဲ။ နှစ်နိုင်ငံလုံးက မိမိကို အကျိုးကျေးဇူးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကလည်း နိုင်ငံသားစွန့်လွတ်ဖို့ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘယ်လောက်ဖိုးရှိသလည်း။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးထားမှု ဘယ်လောက်ရှိသလည်း။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ အရင် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာပိုင်ဆိုင်မှုမယ်မယ်ရရ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဆုံးဖြတ်ရတာ ပိုလွတ်လပ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်မယ်လို့ရည်မှန်းထားကြတဲ့သူတွေလည်း စင်္ကာပူမှာအတော်များပါတယ်။ တကယ်မိမိဆန္ဒကိုမိမိ သိပြီးပြောနေတာဆိုရင်ကောင်းပါတယ်။ တကယ်တမ်း ကိုယ့်နိုင်ငံကိုကိုယ် Retreat တစ်ခုအနေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနေမယ်ဆိုပြီး မျှော်မှန်းကြတာပါ။ သေသေချာချာ မပြင်ဆင်ထားရင် ဟိုမှာတိုက်ပွဲ ပြန်စရပါလိမ့်မယ်။ တကိုယ်ရေတကာယဆို သိပ်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ လင်မယားနှစ်ဦးထဲလည်း သိပ်မဖြစ်လောက်ပါဘူး။ သားသမီးတွေပါ ပါလာခဲ့ရင် သူတို့ရဲ့ဘဝတွေပါနစ်နာသွားနိုင်ပါတယ်။ သားသမီး ဘဝ ရှေ့ရေးနစ်နာသွားလို့ စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခဟာ မိဘတွေအတွက် အင်မတန်လေးလံ ပူလောင်ပါတယ်။ ကိုယ်စင်္ကာပူမှာရနေတဲ့ ဝင်ငွေ၊ စုဆောင်းငွေ၊ ပြန်မယ့် အသက်အရွယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ရလိုတဲ့ စုဆောင်းငွေပမာဏ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုယ့်အတွက်ရှိတဲ့ အခွင့်အလမ်း စတဲ့အချက်တွေ အများကြီး ထည့်စဉ်းစားရပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေ အကြောင်းလည်းအားလုံးသိကြတော့ အကျယ်ချဲ့ ဖော်ပြ မနေချင်တော့ပါဘူး။
နိဂုံး နှင့် သုံးသပ်ချက်
PR နှင့် Singaporean ရွေးချယ်သည့်ကိစ္စသည် လွယ်ကူသည့် ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ပိုခက်သည်က ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းပါ။ PR အနေနှင့်သာ နေမည် မြန်မာပြည်ပြန်မည်ဆိုပါက လုပ်ရမည့် Plan က တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Singaporean ယူပြီး အခြေချမည့်သူနှင့် တခြားရွှေ့မည့်သူတို့ကလည်း စီမံရမည်များက ကွဲလွဲပါလိမ့်မယ်။ ပြန်မည့်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးအတွက် Long term Investment များလုပ်မည်ဆိုပါက နစ်နာမှုတွေ များနိုင်ပါတယ်။ ကလေးပညာရေးစုဆောင်းငွေများ Investment များလည်းမလုပ်သင့်ပေ။ နိုင်ငံသားစွန့်လွှတ်မည့် သူများအတွက်တော့ ထိုအရာများသည် မရှိမဖြစ်နီးပါး ဖြစ်နေပါတယ်။ မိသားစု လုံခြုံမှုကို တည်ဆောက်ရန် ထိုအရာများ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီစာတမ်းလေးရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ အမြင်ကို ပေးဖို့ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ပါ။ ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းလည်း မပြုသင့်ပါ။ မိမိဘဝအခြေအနေနှင့် မိမိ၏ မိသားစု ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ စာတမ်းတွေရေးကြတယ်ဆိုတာလည်း အချက်အလက်တွေပေးနိုင်ဖို့ပါပဲ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ အပြင်လူက ဘယ်လိုပင် တိုက်တွန်းသော်လည်း "Feeling မလာဘူးကွာ" ဆိုတာလောက်နှင့် ပြီးသွားနိုင်ပါသည်။ ဘယ်လောက်ပင် Logical Reason တွေပေးပေး Heart Feeling ကလည်း အရေးပါသော အချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ Logical ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် Feeling လည်းပါမှသာ စိတ်ချမ်းသာကြပါလိမ့်မည်။
နောက်ဆက်တွဲ-၁ CPF နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ
Home ownership rates http://www.singstat.gov.sg/stats/charts/hhld.html Resident Households http://www.singstat.gov..sg/stats/themes/people/hhldindicators.pdf http://en.wikipedia.org/wiki/Homeownership_in_the_United_States#Int... Western views of CPF and Social Security Fund http://www.cascadepolicy.org/pdf/misc/2009_04.pdf http://www.vandine.com/cpfa.htm http://www.vandine.com/cpfpaper5.htm CPF Issues http://www.singapore-window.org/sw02/020722af.htm http://www.singapore-window.org/sw02/020715r2.htm http://www.singapore-window.org/sw02/020716aw.htm http://www.singapore-window.org/sw02/020703a3.htm
More about global pension issues
နောက်ဆက်တွဲ-၂ Tax and Cost of Living
1 Singapore dollar = 0.690322 U.S. dollars 1 Australian dollar = 0.8286 U.S. dollars SG 2008-2009 cut http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=1190 http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_Singapore Chargeable Income Rate (%) Gross Tax Payable ($) First $20,000 = 0% Next $10,000 = 3.50% = 350 First $30,000 + Next $10,000 = 5.50% = 350 + 550 First $40,000 + Next $40,000 = 8.50% = 900+3400 First $80,000+Next $80,000 = 14% = 4300+11200 First $160,000+Next $160,000 = 17% = 15500+27200 First $320,000+Above $320,000 =20% = 42700++ 2008-2009 cut for AU http://www.ato.gov.au/individuals/content.asp?doc=/content/12333.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_Australia $1 – $6,000 = Nil $6,001 – $34,000 = 15c for each $1 over $6,000
$34,001 – $80,000 = $4,200 plus 30c for each $1 over $34,000
$80,001 – $180,000 = $18,000 plus 40c for each $1 over $80,000
$180,001 and over = $58,000 plus 45c for each $1 over $180,000
10% for $0 – $8,025 = $0
15% for $8,026 – $32,550 = $16,051
25% for $32,551 – $78,850 = $65,101
28% for $78,851 – $164,550 = $131,451
33% for $164,551 – $357,700 = $200,301
35% for $357,701 = x
2007 CPI = 103.5
2007 Inflation = 2.1
2008 CPI = 110.3
2008 Inflation = 6.5
နောက်ဆက်တွဲ-၃ Study on senior citizen
http://www.mcys.gov.sg/MCDSFiles/Resource/Materials/NSSC%202005.pdf Majority of senior citizens (56.9%) had no formal educational qualification, defined as either having no education at all or not completing primary education. Senior citizens in younger age groups were better qualified than their older counterparts. There were proportionately more senior citizens aged 55 to 64 with at least secondary qualifications (24..4%) than those aged 75 and above (10.4%). 73.7% of senior citizens aged 55 and above were owners or co-owners of the homes they lived in. Home ownership decreased with age. Home ownership among those aged 65 to 74 (70.5%) and 75 and above (53.1%) was lower. Most (79.2%) senior citizens aged 55 and above considered their total income ‘Adequate’ or ‘More than adequate’ for their expenses. Senior citizens in lower income groups had similar feelings of adequacy towards income as those with higher incomes, except those with incomes of ‘$1,500 and above’. Those who fell under that income range hadahigher proportion of senior citizens finding their incomes ‘More than Adequate’. Of senior citizens aged 55 and above who had madealump-sum withdrawal from their CPF savings, 57.4% had placed their withdrawn CPF funds in the bank as deposits. 44.6% had used the funds for household expenses and another 12.0% had purchased property with the funds. 65..9% of senior citizens aged 55 and above were economically inactive – they were not working, and were not actively seeking work. 5.8% were unemployed – not working, but actively looking for work – while the remaining 28.2% were working. Most of the employed senior citizens aged 55 to 64 were sales and service workers (36.3%), and cleaners and labourers (23.4%). A fair proportion was also in the professional/managerial role (16.4%). More males (21.0%) than females (8.1%) heldaprofessional/managerial position within the age group 55 to 64. http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/people/elderyouthgender.html http://www.singstat.gov.sg/stats/charts/popn-area.html#popnB The majority (67.8%) of senior citizens aged 55 and above ‘Agreed’ or ‘Strongly Agreed’ that they were less stressed and worried about less as they aged. The proportion of senior citizens who felt this way increased with age. Family support was an important factor in helping senior citizens feel less stressed and worried about things. On the other hand, independence andaperceived lack of importance to their friends contributed more towardsastress-free ageing process. Age Structure Below 15 yrs 2/ ('000) = 671.3 15-64 yrs 2/ ('000) = 2,655.6 65 yrs & over 2/ ('000) = 315.8
Multiplier Population Percentage
Young 671.30 1,000.00 671,300.00 18.43
Mid 2,655.60 1,000.00 2,655,600.00 72.90
Elder 315.80 1,000.00 315,800.00 8.67
Total 3,642.70 1,000.00 3,642,700.00 100.00
Percentage Percentage of Seniors Percentage against Total Population
Independent Seniors 65.90 8.67 5.71
Working Seniors 34.10 8.67 2.96
Non Educated 56.90 8.67 4.93
နောက်ဆက်တွဲ-၄ မြန်မာလူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဥပဒေ
(c) Foreigner can stay in Myanmar during the period of validity in the visa. If he wants to overstay, he may apply for the extension of stay with the recommendation of the Ministries concerned. The fees for the stay-extension are as follows:- From 1day to3months - 36 $ From3months to 1years - 90 $ (d) If the foreigner overstays, he has to pay the overstay fees as follows:- From 1day to 90 days -3$ per day From 90days and above -5$ per day (e) F.R.C - Those who stay continuously for 90 days have to apply foraForeigner's Registration Certificate ( Initial ) within 90 days from the date of their arrival . The fee for the F.R.C is US9$. If he applies after 90 days, he has to payadouble amount of US 18 $. - Whenaforeigner who holds the F.R.C re-enters, he has to apply for the revalidation of his F.R.C within 30 days from the date of is arrival. The fee is6$ and if he apply after 30days, he has to pay the double amount US 12 $ as fine. - Since the validity of all F.R.C expires on 30th Nov, the F.R.C has to be renewed during the month of December annually. The renewal fee is 9$ .If the renewal is not done during the specified period, the Holden of the FRC has to payadouble amount of US 18$ asafine. (f) During the permitted stay with the recommendation from the Ministry concerned, the Single Journey Re-Entry Visa and the Multiple Journey Re-Entry Visa are issued to those who enter for business purposes. (g) The Re-entry Visa is issued to foreigners permanently residing in Myanmar, with prior permission obtained from the Department of Immigration and National Registration. http://www.myanmarevisa.com/myanmar-visa-point1.htm http://www.uniteam-travel-myanmar.com/faqs.html
https://www.babybonus.gov.sg/bbss/html/index.html You will getacash gift of up to $4,000 each for your 1st and 2nd child and $6,000 each for your 3rd and 4th child. All your children born on or after 17 August 2008 will also enjoy Government contributions in the form ofadollar-for-dollar matching for the amount of savings you contribute to your child’s Children Development Account (CDA). If your child is born before 17 August 2008, he or she will enjoy the Government matching contributions in the CDA if he or she is your second to fourth child. http://www.moe.gov.sg/initiatives/financial-assistance/ Monthly Gross Household Income Monthly Gross Income per Dependent Child1 Benefits Not exceeding $1,500 Not exceeding $600 • 100% fee subsidy • Free textbooks and school attire at Secondary level; $750 bursary at Junior College level • 75% subsidy of national exam fees (100% subsidy for pupils under MCYS’ Public Assistance Scheme) $1,501 - $2,500 $601 - $1,000 90% fee subsidy2 $2,501 - $3,750 $1,001 - $1,500 75% fee subsidy2 $3,751 - $4,500 $1,501 - $1,800 50% fee subsidy2 $4,501 - $7,200 $1,801 - $2,900 33% fee subsidy2
နောက်ဆက်တွဲ-၆ Aisa Financial Crisis
http://en.wikipedia.org/wiki/1997_Asian_Financial_Crisis Thailand: 1997 - Not clearly stated Indonesia: 1997 - Not clearly stated Malaysia: 1997 - 2005 Hong Kong: 1997 - 2001 China: 1998 - 1999 South Korea: >ayear Singapore: >ayear The CIA World Factbook reported that the per capita income (measured by purchasing power parity) in Thailand declined from $8,800 to $8,300 between 1997 and 2005; in Indonesia it declined from $4,600 to $3,700; in Malaysia it declined from $11,100 to $10,400. Over the same period, world per capita income rose from $6,500 to $9,300. Indeed, the CIA's analysis asserted that the economy of Indonesia was still smaller in 2005 than it had been in 1997, suggesting an impact on that country similar. Prepared by Thein Myint Win.
0 comments: on "စင်္ကာပူနိုင်ငံသားခံယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော သုံးသပ်ချက်"